नागरिकतामा बाबुको नाम –‘बलात्कारबाट जन्मिएकाे सन्तान’ |
नागरिकतामा बाबुको नाम –‘बलात्कारबाट जन्मिएकाे सन्तान’
प्रकाशित मिति :2019-05-06 11:16:48
आदरणीय सांसद ज्यूहरु,
मेरो बाबाले मलाई १२ वर्षको उमेरमा काठमाडौंमा काम गर्न पठाए । १४ वर्षको हुँदा मेरा ५० वर्षका घर मालिकले बलात्कार गरे । १६ वर्षकी हुँदा त्यही मालिकका २० वर्षका छोराले बलात्कार गरे, ३ चोटी ।
मेरो गर्भ रहेको थाहा पाएपछि मेरी मालिक्नीले मेरो घर कैलाली पठाइदिइन् । यसको विवाह गरिदनु भनेर बाबालाई १० हजार रुपैयाँ दिइन् ।
बाबाले पोलियो भएर सुस्त मनस्थितीको ३० वर्षको केटासँग मेरो विवाह गराइदिए । सुस्त मनस्थितीका ती युवकसँग मेरो शारीरिक सम्बन्ध भएन । ८ महिनामा मेरो छोरा चाहीँ जन्मियो । घरका कसैलाई पनि थाहा थिएन कि मेरो लोग्नेको छोरा होइन भनेर । सबै खुसी भए ।
धन्य, मेरो लोग्नेको नागरिकता रहेछ । त्यसैबाट मेरो पनि नागरकिता बन्यो । १० वर्षपछि ज्वरो आएर मेरो लोग्ने बित्यो । आज मेरो छोरा १६ वर्षको भएपछि म उसको नागरिकता लिन जाँदैछु ।
उसको नागरिकतामा म खुलाएर लेख्नेछु, ‘काठमाडौंको मालिकको फलाना छोराले मलाई बलात्कार गरेर जन्मिएको छोरो भएकोले यसको बाबुको नागरिकता ल्याउन सक्दिन । त्यसैले मेरो नाममा नागरिकता देउ ।’
के मेरो छोराले नागरिकता पाउला ?
म आछामकी ३० वर्षीया महिला हुँ । १४ वर्षको उमेरमा म छाउगोठमा बस्दा एक रात तीनजनाले बलात्कार गरे । त्यो कुरा फैलिएपछि ३ जना युवक समातिए, पक्राउ परे । बलात्कार गरेको हो भनेर स्वीकारे ।
मेरो गाउँघरमा चाहीँ ‘केटी खराब रहेछ । त्यसैले बोलाएर त ३ केटा गए होलान् । नत्र गाउँघरका सोझा केटा कसरी त्यो छौपाडीमा पुग्छन् भने ।’
प्रहरीले केटाहरु समात्यो । अदालतले तीनै जना केटा १२ वर्ष उमेरभन्दा कम भएकोले ५ महिनामात्र सजाय दियो । ६ महिनापछि त ती केताहरु फुक्का गोरु जस्तै भए ।
तर, म त छाउपडीमा बलात्कार भएको बेला गर्भवती भएछु । मलाई त छुई भएको बेला संसर्ग गरेपछि गर्भ रहँदैन भनेर सिकाएको थियो । छुई भएको ४ दिनमा बलात्कृत भएपछि मेरो अर्काे दुःख थपियो ।
दुई महिनासम्म महिनावारी भएन कहिलेकाहीँ यस्तै हुन्छ भनेर वास्ता गरिएन । ४ महिनापछि गाउँकी एक सुँडेनीले मेरी आमालाई ‘यी नानीको त गर्भ रहेको जस्तो लाग्छ’ भनेपछि मेरी आमा त छाँगाबाट खसे जस्तै भईन् ।
उनले मलाइ कुभिन्डो काँचो मेवा खाए गर्भ खस्छ भनेर खुवाइन् । तर अहँ त्यो गर्भ त खसेन । गाउँबाट गर्भ तुहाउन कतै लग्ने पैसा थिएन । मेरो गर्भ रहेको भनेर परिवारको ठूलो बेइज्जत भयो । मलाई बलात्कार गर्नेहरुलाई चाहीँ कसैले अपमान गरेन ।
९ महिना पछि छोरी जन्मिइ । १५ वर्षकी मलाई दलित जातको छोरी जन्माइ भनेर घर, समाजले पानी बन्द गर्यो । म आज ३५ वर्ष भएँ । २० वर्षको छोरीको नागरिकता बनाउन जिल्लामा गएँ । त्यहाँका कर्मचारीलाई मेरो छोरीको जन्म कसरी भएको याद रहेछ ।
उनले बाबु नभएको कारण लेखे । ‘छौपडीमा बस्दा ३ युवकले बलात्कार गर्दा भएको छोरीको बाबु को हो छुट्याउन सकिने अवस्था छैन । त्यसैले निजको नागरिकतामा बाबुको ठाउँमा ‘बलात्कारबाट जन्मेको’ छोरी भनेर लेखिदिनु ।
मेरो छोरीको नागरिकता त्यसरी नै बनेको छ । घन्य, त्यति भएपछि खाडी मुलुकमा गएर काम गर्ने पासपोर्ट त पाइहाल्छे । पासपोर्टमा पनि बाबुको नामको ठाउँमा ‘बलात्कारबाट जन्मिएको छोरी’ भनेर लेखिदेलान् कि ?
(आमाले छोरी छोराको नागरकिताको लागि लेखेको बकपत्र)
सभार : डा. अरुणा उप्रेतीको फेसबुक
-वसन्ती बास्तोला- जनआन्दोलन, माओवादी द्वन्द्व, नेपाल बन्द सबैबेला काम गराउनको लागि विकल्प देख्ने सञ्चालक संकटमा तलबको
-महिला खबर- महिलाको भूमिमाथिको अधिकार र स्वामित्व बढाउन प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा महिलाको नाममा जग्गाको
हाल नेपालमा ५२ हजारको हाराहारीमा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरु कार्यरत रहेका छन् ।
यसका लागि सरकारले ६७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
३ वर्षभित्र सबैको स्वास्थ्य विमा गरिने । सबै स्थानीय तहका ४० प्रतिशतलाई स्वास्थ्य विमाको दायरामा